အမှေးသေးသော၏တင့်တယ်သည်ဘဝအသက်တာ — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
သူကသူ့ mama အပေါ်မှီခိုင်, ဘုရားသခင့ပြီးသားသူ၏နာမကိုသိ
သူမ၏အစာအိမ်အတွက်အမြိုးအနှယျအားဖြင့်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့နှလုံးနာ၏ hard
လက်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့, ဒါပေမဲ့သင် hack သူတို့အားကတ်များယူကြဘူး
ရပ်တန့် Homie, နှင့်ရွေးချယ်မှုနှင့် ပတ်သက်. စဉ်းစား
ဒါကြောင့်သူမတကယ်သူမ၏ဖေဖေလိုအပ်ပါတယ်, သူမ၏ခစျြ, ရွှင်လန်းဖို့
သူမ၏ mama စွန့်လွှတ်မထားပါနဲ့, သူမ၏ခစျြနှင့်သူမ၏ထောကျပံ့
'' သင်တော်တော်လေးမကြာမီသူမ၏မျက်စိ၌ရှာဖွေနေပါလိမ့်မယ် homie စေ,
သို့သော်ထိုသို့ယခုသိပ်နောက်ကျင်, '' စေသင့်ကလေးပတ်လည်မှာမဟုတ်ပါဘူး
ငါကသင့်ရဲ့ core ကိုမှနှိပ်စက်တာသိ, ကအပြစ်သငျသညျဆငျးသကျအလေးချိန်သည်
ခရစ်တော်ယေရှုသည် လာ., သူကကမ္ဘာမြေမှဆငျးသကျ
ကျွန်တော်တစ်ဦးကလေးရဲ့အသက်ကိုယူသောအခါ yeah သူကယ့်ကိုစိတ်မကြင်နာင်
'' အကြောင်းသူကသူတို့ကိုဖန်ဆင်း, ဒါပေမဲ့သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခမှငါတို့ကိုကယ်တင်ဆီသို့ရောက် လာ. ,
သူအပေါငျးတို့သအရှက်ကွဲခြင်းကိုဖျက်မည်, homie သူကကျွန်တော်တို့ကိုလက်ျာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်
သူသည်သင်၏အရပျ၌အသေခံ, ခွင့်လွှတ်ခြင်းလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရှိရဲ့, သူကကျွန်တော်တို့ကိုဘဝပေးနိုင်ပါသည်
သူကညာဘက်ရှိပါလိမ့်မယ်, ညာဘက်ရှိ, ညာဘက်ရှိ
ဂျက်ကီ • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:07 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ချစ်ခြင်းမေတ္တာခရီးစဉ် Lee က!!! အံ့သြဖွယ်လေးနက်တဲ့စကားများ, ယခုငါကိုယ်ဝန်ဖျက်ချအကြောင်းကိုလူတို့အားဆိုသညျကားအဘယ်သို့သိပါ!! ကျေးဇူးတင်ပါသည်ခရီးစဉ်!!
Diddleymomma • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:07 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဒါကဒါကြောင့်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါသည်. ကျွန်မအနေနဲ့ဖျက်သိမ်းမှေးခငျြး၏ညီမကဒီမှာယနေ့ညထိုင်. နှစ်ပေါင်းအဘို့အကြှနျုပျ၏တတ်ကြဘူးသူမကဤသူငယ်၏ဘဝခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကိုအတူရုန်းကန်. ယရှေုသညျသူမ၏အမှောင်နာရီအတွက်သူမ၏တွေ့ရှိခဲ့သည်အထိ, သူမကငြိမ်းချမ်းရေးမှာလုံးလုံးခံစားရဘယ်တော့မှနိုင်. အခုတော့သညျယရှေုသူမ၏သခင်ဘုရားကြောင်း, သူမလုံးဝသစ်ကိုဖန်ဆင်းထားသည်. အခုဆိုရင်သူမကသူတို့၏သားသမီးတို့သည်ဖျက်သိမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်ကြသူကတခြားမင်းသမီးသူ၏ကောင်းမြတ်ခြင်းနှင့်ခွင့်လွှတ်ကြွေးကြော်နေသည်.
ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်တစ်ခုတည်း mom, ဖြစ်ကြောင်းကို. သင့်ရဲ့သီချင်းကယ့်ကိုနက်ရှိုင်းစွာငါ့နှလုံးလှုပ်ခတ်. သင်ပြုသမျှသောအဘို့သင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်! အမြဲသင်တို့အဘို့ဆုတောငျးလကျြ!
Kilika Täbron • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:08 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဤဗီဒီယိုအားငါ့ကို ပို. ပင်သီချင်းကိုတန်ဖိုးထားစေသည်.
Humdaddy • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:08 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဒီသီချင်းကိုကြိုက်တယ်. ငါ့ကိုဘုရားသခငျသညျအမေရိကရှိကိုယ်ဝန်ဖျက်ချအဆုံးသတ်မယ်လို့ဆုတောငျးလကိုစောင့်ရှောက်ရန်အဘို့အဒါဟာလုံးဝကြီးအသတိပေးချက်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်လည်းငါတို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေမှာငယ်ရွယ်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအားပေးသူတို့မိဘများဖြစ်ခြင်း၏စိတ်ကူးနှင့်အတူရုန်းကန်အဖြစ်သူတို့ကိုပယ်တွန်းမလိုအပျကွောငျး. ထိုကဲ့သို့သောအားတက်စရာသီချင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်!
စာရာသည် • ဇန္နဝါရီလ 22, 2014 တွင် 8:37 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ် lee အဲဒါကိုမျက်ရည်မှငါ့ကိုမဆောင်တတ်၏ဒါကြောင့်အဆင်းလှရဲ့ဒီသီခငျြးကိုအဘို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. ကလေးများကယူစခွေငျးငှါလက်ဆောင်တစ်ခုရှိပါတယ်9ဆုကြေးဇူးကိုကြည့်ရှုရန်ခက်ခဲအကြိမ်လအတွင်း , Oh ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုဒါတန်ဖိုးရှိမယ့်. ဤသီချင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်.